Iimbalasane Inkcazo yokuqaqambisa
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nokuhanjiswa simahla Kuthatha malunga neentsuku ezi-5 ukuya kwezi-8 zomsebenzi ukufikelela e-US, kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-8 ukuya eJapan, Korea, Singapore, Malaysia. Kwaye malunga neentsuku ezi-4 ukuya kwezi-10 zokufika eCanada, e-Australia, eMexico, okanye kumazwe e-EUR.
Ukupakisha ngokwesiko kunye nokuPhawula Yenza i-logo yohlobo lwakho kwiimveliso zakho. I-NextsChain ixhasa ulwenziwo lwe-OEM kunye ne-ODM yophawu lwegama lakho kwiibhokisi zakho zokupakisha.
Ukuyeka ukuyeka enye Sinikezela ngemveliso esemgangathweni ekuthengiseni. Emva kokufumana ukuthengisa, into ekufuneka uyenzile kukuhlawula kwaye iNextsChain iya kuyizalisekisa iiodolo zakho. Emva koko siya kuthumela iiphakheji zakho ngaphandle usebenzisa iindlela zokuhambisa ngokukhawuleza, kwaye sidlulise inombolo yokulandela umkhondo kwiiodolo zakho. Akukho mfuneko yakwenza nantoni na. Njengoko kunjalo, uya kusindisa malunga neepesenti ezingama-90 zexesha lakho. Awunakukhathazeka malunga ne-inventri, ixesha lokuhambisa ixesha elide okanye iakhawunti yakho yeAliexpress iyavalwa.
Myalelo ngokukhawuleza I-NextsChain ikuvumela ukuba ubeke ii-odolo ezili-100 kwimizuzu, ngokukhawuleza kunaso nasiphi na esinye isixhobo! Yonga ixesha kwaye ufumane ukusebenza kakuhle nge-AliExpress yehla neqabane!
Izigidi zeemveliso ezingcono Abathengi baya kuba neentlobo ngeentlobo zabathengisi abaphezulu kwaye bakhethe kwinani elingaphezulu kweemveliso ezingama-500,000 ngexabiso elithengiswayo. INextsChian ikwabonelela ngeemveliso eziPhumeleleyo kunye neemveliso eziHambisayo ukunceda abathengisi bethu baqhube ishishini labo lokuwisa ngempumelelo.
Imiyalelo yokuZalisekiswa ngokuzenzekelayo Sinqakraza nje kude ukufezekisa yonke imiyalelo yakho. Siza kuqhuba ulawulo lomgangatho, ukupakisha kunye nokuhambisa abathengi bakho ngqo.
Ukulandelwa kwephakeji kunye nokuLawula Ngenkqubo yethu yokulandela umkhondo okrelekrele, i-NextsChain ikuvumela ukuba ulawule ngokufanelekileyo ipakeji yakho, unokufumana ngokulula ukuba ipakethe yakho kwaye izakuzisa nini. Ukuphepha uninzi lwabathengi ukhalaza kwaye ugcine ixesha elininzi.
Inkxaso yokuHlela uBuck I-NextsChain ibonelela ngesixhobo esingcono nesilula sokusetyenziswa kweBuck ukukuvumela ukuba ulawule iimveliso zakho zokudwelisa ngokufanelekileyo ngaphandle kwexesha elincinci. Unokuba nexesha elingaphezulu lokunikela ingqalelo kwintengiso yakho nakwabanye ishishini lokuthengisa.
Uluhlu oluzenzekelayo kunye noLawulo lweXabiso Iinkonzo zolawulo lwempahla yexesha lokwenyani, kunye nohlaziyo lwamaxabiso oluzenzekelayo kunye nesaziso ngomthetho. Olunye ukhetho olukhulu kwi-AliExpress
Hlanganisa u-Oberlo Ukuba wenza ishishini lokuwisa ngeoberlo ngaphambili. Asinokukunceda kuphela ekunciphiseni ixesha lokuhambisa kunye nokupakisha ngokwesiko kunye nokufaka uphawu kwiimveliso zakho, kodwa kukunceda ukungenisa iimveliso ezivela kwi-oberlo ukuya kwi-NextsChain ngokudibanisa iimveliso ngokuchofoza nje okumbalwa endaweni yokukopa nganye nganye.
Isicwangciso saSimahla saNaphakade Sibonelela ngesicwangciso simahla simahla ngonaphakade
Uyilo oluPhendulayo I-NextsChain App kunye noyilo olulungileyo lokuphendula, sebenza kakuhle nge-smartphone yakho, iTafile okanye i-PC compuer. ungalawula ishishini lakho lokuwisa nangaliphi na ixesha naphi na.